Unsubscribe Naqshada Bogga
Waxaa laygu qoro olole talaabo cadaalad ah oo adag oo ka socda shirkad dalab soo jiidasho leh leh. E-mayllada waxay ahaayeen qoraal cad laakiin waxay lahaayeen nuqul aad u dheer. Mar kasta oo aan ficil ku qaado degelkooda, waxaan ka heli jiray waxyaabo kala duwan oo ku saleysan waxqabadkeyga (ama dhaqdhaqaaq la'aan). Maanta waxaan helay emayl si fiican u qoran laakiin waxaan go aansaday inaan iska daayo dalabka isla markaana aan ka noqdo email-ka.
Waa tan sida ay u macsalaameeyeen:
Hoog! Tani waa farriinta ka dambeysa tan, "waad joojisay ciyaarta si aan ugu sii gudubno nuugista xigta next see ya!"
Kaliya iyada oo aan "see ya!".
Seddex Qeyb Si Aad Ula Bixdo Bogga Degitaanka:
Diiwaangelinta Doorka Ku Salaysan - U soo bandhig mawduucyada ku saleysan mawduucyada halkii aad ka saari lahayd master-ka. Waxay noqon kartaa mid fudud sida, "Lagama saarin diiwaangelinta ololahan emaylka, halkan waxaa ku yaal mowduucyo kale oo aad xiiseyn karto:" oo leh dalab aad kaga doorto kuwa kale. Xitaa waxaad isku dayi kartaa inaad ku xiro dhiirigelin.
Sababaha Ka Bixida Diiwaangelinta - Weydii Sababta! Maxay uga baxeen Ma emailo aad u tiro badan baa? Kuma filna? Ma xiiseyneyso? Ma jiro olole e-mayl ah oo hagaagsan, sidee wax u weydiin weyday sidaad wax uga sii fiicnaan lahayd? Ugu mahadnaq ka qaybqaadashadooda oo raali geli haddii ay doortaan sabab oranaysa, "waad nuugtaa!".
Bixinta Dheeraad ah - U adeegso dhammaan boggaas hantida maguurtada ah dalabyo kale! Ha ku tuurin qof weyn bog cad oo madhan qofkan! Waxay halkaas ku joogeen dan iyo ujeedo mar ama mid kale (markay qoreen). Maxaa diidaya inaad tusto badeecadaada, adeegyadaada, warqadda cad, iwm. Ka warran astaamaha bulshada ee la raacayo?
Markii aan u shaqeynayay ExactTarget, waxaan hirgeliyay tusaalahan guud ee nidaamka oo dhan (iyo suuqgeynta ayaa sameysay nuqul iyo naqshad). Boggu wuxuu leeyahay mahadnaq, cilad ku saabsan ExactTarget, xiriiriye shakhsi ahaaneed, iyo sidoo kale xiriiriyeyaal inta kale ee boggooda!
Mararka qaarkood iibku wuxuu bilaabmaa marka macaamilka ama rajadu ay ka baxayaan albaabka. Waxaad fursad u leedahay inaad sameyso aragti waarta, ha ku seegin adigoo bog maran!
Tags: saxsansayid ka noqoka deg deg deg deg deg ahka saar bogga
Waxaan la yaabanahay sida gabowgay (laakiin web-karti leh) awooweyaasha ay u tarjumi karaan "laga saaray" (haddii loo maleeyo inay ogaan karaan sida looga baxo liiska wax. Ka saaray internetka? Laga saaray xiriirkoodii xawaaraha sare? Ma laga saaray gurigooda? Waxaan kaliya sawiri karaa baryadooda quusta ah ee caawimaadda….
Waxaan u maleynayaa inay kafiican tahay dhahida 'bakhtiisay' ama 'la joojiyay'. 🙂
Douglas, tani waa talo fiican. Ka-saaris-bixintaydu ma ahan mid sidaas u xun, laakiin sidoo kale ma aha mid dhalaalaya. Waxaan weydiinayaa sababta ay uga bixi waayeen ugana mahadcelinayaan aqriskooda.
Laakiin waxaan u maleynayaa inay fikrad fiican tahay in dib loo booqdo bogga si loo arko waxa ay arkaan oo la hubiyo inay tahay fariinta aad rabto inaad uga tagto.
Waxaan u maleynayaa in "bogga qurxoon ee macsalaameynta" ay caadi tahay. Laakiin waxaan hayaa hunch waa wax aan micno lahayn ilaa aad ka xasuusiso isticmaaleha macluumaadka ay ka saareyaan.
Caadi ahaan, haddii qof dhibsado inuu ku dhufo xiriirka ka baxa, waa heshiis la dhammeeyay.
Ilaa iyo inta laga hadlayo oo la isweydiinayo sababta isticmaale-yaashu dib uga-saareyso, waxaan jeclaan lahaa inaan arko stats la taaban karo oo ku saabsan haddii isticmaalehu uu buuxiyo foomka iyo waxa ay dhahaan.
Shakhsiyan, marka sanduuqa “Maxaad u baxaysaa” ama xamuulka bogga ka dib markaan xaqiijiyo waxa aan rajaynayo even Xitaa ma sugayo in bogga la soo raro ka hor inta aanan garaacin badhanka biraawsarka.
Waan ku raacsanahay in ka bixitaan la'aanta laga yaabo inay tahay heshiis la qabtay - ujeedkeygu waa inaad sii wadi karto inaad isku daydo oo aad xiriir la sameyso qofka sidoo kale aad siiso alaabo ama adeegyo kale.
Xaqiiqdii, waxaan u maleynayaa habka ugu wanaagsan ee loo maareeyo bog sidan oo kale ah inay tahay in lala socdo xirmadaada gorfaynta oo aan arko inta dad ee la falgaleysa KADDIB ka noqoshada!